बर्मेली दम्पती - मूल्याङ्कन अनलाइन
घनश्याम ढकाल | January 6, 2018
(नेपाली प्रगतिशील साहित्यिक क्षेत्रमा एक नक्षत्रका रुपमा रहेका बितेका साहित्यकार घनश्याम ढकाल प्रगतिशील लेखक संघका पूर्व अध्यक्ष पनि थिए । नेपाली क्रान्तिका लागि आफू मात्र होइन आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई नै समेटेर अगाडि बढेका उनका एक छोरा जनयुद्धमा शहीद बने । २०१० सालमा स्याङ्जामा जन्मी कर्मथलो पोखरालाई बनाएका साहित्यकार घनश्याम ढकालले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन साहित्य सिर्जना मार्फत् नेपाली क्रान्तिका लागि अर्पे । कविता, कथा, उपन्यास, विवेचना, समालोचना, संस्मरणलगायत गरी झण्डैझण्डै पुगनपुग दुई दर्जन कृति सिर्जना गरी प्रकाशित गराएका उनी जनयुद्ध दिवस मनाउन काठमाडौंको खुलामञ्चतिर लाग्दै गर्दा प्रदर्शनी मार्गमा मोटरसाइकलको ठक्करमा परी २०६८ साल फागुन १ गते निधन हुन पुगेका थिए । उनी प्रगतिवादी साहित्य सर्जक त छँदै थिए, साथै उनी समालोचक, चिन्तक र क्रान्तिकारी अभियन्ता पनि थिए । उनै साहित्यकार घनश्याम ढकालले सिर्जना गरेको जनयुद्ध र त्यसपछिका दिनहरुमा घटेका घटनाहरुलाई चित्रण गरिएको कथा ‘बर्मेली दम्पती’ यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । हामीले यो कथा ‘कथालय’ साहित्यिक–साँस्कृतिक पत्रिकाबाट साभार गरेका हौं ।–सम्पादक)
‘बाबु, एक पाथी चामल देऊ न ।’ बुढी आमैले पसलेसँग अनुनयको स्वरमा भनिन् । उनले विकासे मलको बोराबाट बनाइएको मैलो झोला बोकेकी थिइन् ।
‘पैसो छ कि छैन ?’ बसेको ठाउँबाट नउठी पसलेले सोध्यो ।
‘छैन बाबु ।’ बुढी आमाका नजर तल झुके । ‘तीन चार हजार उधारो भइसक्यो, अब काँबाट दिनु ? मैले नि किनेरै ल्याउने हो ।’
‘यति छ, तिरम्ला नि चाँडै नै ।’ उनले मैलो चोलाको खल्तीबाट दुई सय रुपैयाँ झिकेर पसलेको हातमा राखिदिइन् ।
‘खोइ, काँबाट ल्याएर तिर्छ्यौ ?’
‘केही नलागे जग्गा बेचेर पनि तिरम्ला तिम्रो पैसा खाएर मरम्ला त !’
‘पैसा कमाउनेहरुले सहरबजार ताकिसके, त्यो पाखो कसले किन्छ ?’
सबै सहरबजाराँ काँ जालान् र ?’ याँ बस्नेलाई जग्गा चाहिन्न र ? खसालेर लिन पाए तिम्ले न लिने थियौ ।’
‘दुई पोको नून देऊ न बाबु, मैले त भुसुक्कै बिर्सेकी ।’
‘ए साँच्चै तिमेलाई त सर्खारले पैसा दिएको छ रे नि त । जाँदैनौ लिन ?’ नूनका पोका दिँदै पसलेले भन्यो ।
‘हाम्लाई केको पैसा दिनु ?’ बुढी आमाले अपत्यारिलो स्वरमा भनिन् ।
‘हो मैले साँच्चै सुनेको हो । लडाइँका बेलाँ मरेकालाई दिएका छन् रे । अझ तिम्रा त छोरो र छोरी दुईटा……..।’ पसलेले पछिल्लो वाक्य पूरा गरेन ।
छोराछोरीको प्रसंगले बुढीको छातीभित्र कसैले सियोले घोचेजस्तो भयो । भक्कानिँदै गरेको छातीलाई एउटा हातले बलपूर्वक थिचिन् र अर्को हातले झोलाको फिता टाउकोमा गलाइन् । उमेरले सत्तरी वर्ष काटिसकेकी थिइन् । कपाल सेतै फुलेको थियो । अग्लो कद हुनाले उनका हातखुट्टा मुरलीबाँसको लामो तरी जस्ता देखिन्थे ।
उनलाई चिनाउने गाउँघरको नाम थियो —बाटामुनिकी जेठी । उनका लोग्ने जेठो भएर नै उनी पनि जेठी भएकी थिइन् । जेठाको नाम जगतलाल थियो । उनी अहिले पचहत्तर वर्षका छन् । दुबै आँखामा मोतीविन्दु हुनाले राम्ररी देख्न सक्दैनन् । बिस वर्षको उमेरमा उनी पैसा कमाउन भनी बर्मातिर गएका थिए । अर्को बिस वर्ष बिना चिठीपत्र त्यतै हराए । यता घरतिर दाजुभाइले आश मारिसकेका थिए र छुट्टीभिन्न हुँदा उनलाई अंश पनि राखेका थिएनन् । बिस वर्षपछि एक्कासि घर आउँदा एकातिर सबै दंग परे भने अर्कातिर अंशवण्डामा खैलाबैला भयो । जगतलालका बारेमा अनेकथरि अनुमान गरिए । कसैले उनलाई बर्मामै स्वास्नी छोराछोरी छोडेर आएको भन्ने गर्दथे भने कसैले सरकारले लखेटेर आएको भन्दथे । ऊ आफैले त्यहाँको सरकारले नेपालीलाई बस्न नदिएको र कमाएको पनि केही ल्याउन नदिएको बताउँथे । त्यसैले होला, त्यतिका वर्ष बसे पनि उनले पैसो ल्याउन सकेनन् ।
२०१९ सालतिर जगतलाल नेपाल फर्केका हुन् । त्यतिबेला बर्माबाट धेरै नेपालीहरु लखेटिएका थिए । उताबाट आउनेलाई पुनर्वासका लागि तराईतिर जमिन पनि उपलब्ध गराइएको थियो । जगतलाल भने त्यता गएनन् । र, यतै आफूले अंशमा पाएको जग्गामै गुजारा गरेर बस्ने निधो गरे । अब उनी बाटामुनिका जेठाबाट बर्मेली जेठा भएका थिए भने बुढी बर्मेल्नी जेठी । यिनको खास नाम भने तुलसा थियो । उनी बालविधवा थिइन् । बर्मेली जेठाले कसैले भनेको सुनेनन् र विधवा विवाह गर्न हुन्छ भनेर तुलसालाई बिहे गरेका थिए । तुलसाले सात ओटा सन्तान जन्माए पनि आखिरको छोरो महेश र छोरी निरजा मात्र बाँचेका थिए । महेश जनयुद्द सुरु हुनुभन्दा पहिले नै पार्टी पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनिसकको थियो भने निरजा युद्द सुरु भएको तिन वर्षपछि मात्र छापामारमा सामेल भएकी थिई ।
जगतलाल पहिले निकै खाइलाग्दो अग्लो जिउडाल र लाम्चो अनुहार भएका व्यक्ति थिए । अहिले भने बस्दाखेरि उनका खुट्टा सारसका जस्ता देखिन्छन् । आँखाको समस्या नभएको भए हिँड्डुल गर्न अझै पनि दरा थिए । अहिले उनका घरमा कोही फर्कंदैन । छोराछोरी हुँदा आउने जाने मानिसहरुको लेखो हुँदैनथ्यो । उनी आफै फरासिला मात्र थिएनन् विद्रोहका समर्थक पनि थिए । त्यसैले उनकै प्रभाव र प्रेरणाबाट छोराछोरी विद्रोहमा सरिक भएका थिए । आउने मान्छेहरु उनीबाट प्रभावित भएर फर्कन्थे ।
‘म बर्माका करिन विद्रोहहरुसँग काम गरेको मान्छे हुँ । उनीहरु मकहाँ आइरहन्थे ।’ पार्टीका मानिसहरुसँग बर्मेली बुढाले भन्दथे र करिन छापामारहरुका अनेकों कौशलहरु सुनाउँथे । उनी माओका खुला प्रशंसक थिए ।
‘राम्रो हो नि नयाँ जनवाद, चिनमा माओले ल्याएको । स्वदेशी र विदेशीहरुले कसैलाई चुस्न नपाउने व्यवस्था ।’ जगतलाल भनिरहन्थे । ‘हाम्ले पनि त्यस्तै व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो ।’ बहसमा सरिक हुनेको जवाफ हुन्थ्यो ।
‘आफ्नै किसिमले गर्न खोजे त सफल होला, चिनको नक्कल गर्न खोज्दा धेरै ठाउँका लडाईँहरु असफल भएर तुहेका छन् ।’ बुढा सुझाव दिन पछि पर्दैनथे ।
पीडा भरिएको मन लिएर बुढी घर आइपुगिन् । झोला पिँढीको डिलमा राखेर आफू पनि थचक्क पिँढीमै बसिन् ।
‘आइपुगिस् ?’ खाटमा टुक्रुक्क बसेका बुढाले सोधे ।
‘हो, आइपुगेँ ।’ रुन्चे स्वरमा बुढीले भनिन् । ‘के भयो फेरि ? कतै लोटिस् र हो ?’ ‘केही भको छैन ।’ यस बेला त बुढीको डाँको फुट्यो ।
‘यसलाई आज अवश्य केही न केही भएको छ ।’ मनभित्र कुरा खेलाउँदै बुढी भएका ठाउँमा पुगेर बुढाले उनको टाउको मुसारे । बुढाको छातीमा टाउको राखेर बुढी झन् भक्कानिएर रोइन् ।
‘भन् त भन्, के भयो ?’
‘हाम्रो अवस्था देखेर रुन मन लागेको हो । अब त दुई छाक जुटाउन पनि गाह्रो हुन थाल्यो । तिमी आँखा देख्दैनौ, मेरो मनले हरेस खान थालेको छ । हिँड्दा गोडा लगलग काम्छन् ।’
‘तँ भन्दा म अघि जान पाए त हुन्थ्यो नत्र भने……’ रुन्चे स्वरमा बुढीले भनिन् ।
‘जस्तो भए पनि बेहोर्नुपर्छ, हेर्ने नभएपछि……’ केही क्षण रोकिएर बुढाले फेरि अगाडि भन्न थाले…..’ अब त नातिनातिनाका औंला समातेर हिँड्ने बेला हो ।’
‘त्यो त पुछिइसक्यो ।’
‘अहिलेसम्म अलिअलि हातखुट्टा चल्दै छन्, चल्न छोडेपछि जे त होला ।’ यसपटक बुढाले धैर्य बटुल्दै भने ।
‘पार्टीले हेर्छ भन्थ्यो छोराले ।’ घुँक्कघुँक्क गर्दै बुढीले पुराना कुरा सम्झिन् ।
महेश छँदै बा आमाका बारेमा कुरा नचलेको होइन । पटकपटक युद्धको परिणामका बारेमा पनि छलफल चलेको हो ।
‘लडाइँको के भर हुन्छ र ? दुश्मनले फेला नपार्ने बेलासम्म मात्र हो, फेला पारेपछि……’ एकपटक घर आउँदा महेशले बाआमासँग भनेको थियो ।
‘त्यस्तो अलच्छिनी कुरो नगर बाबु ।’ तुलसाले भनिन् ।
‘यो सत्य हो आमा, त्यसलाई सहने क्षमता अहिलेदेखि नै विकास गर्नुपर्छ ।’ महेशले सम्झायो ।
‘तैंले यस्ता कुरा गर्छस्, हाम्रो के हालत होला ?’
आमाले सुस्केरा काढ्दै भनिन् । छोराको माया मान्दै उनले उसको मृत्युको असहज कल्पना गर्न पुगिन् ।
‘क्रान्ति सम्पन्न नहुने बेलासम्म सहिद परिवारलाई पार्टीले हेर्छ, त्यसपछि सरकारको दायित्व हुन्छ ।’ उसले सम्झायो । यसोभन्दा त्यहाँ असजिलो मौनता छायो । केही बेरसम्म कसैले बोल्ने रुचि देखाएनन् ।
‘पहिले त्यतिका मान्छे आउँथे पार्टीका, अहिले त खै…………’ बुढाले लामो सास ताने ।
‘उतिबेला त छोरो थियो, छोरी थिई, तिनलाई कजाउन पाइन्थ्यो र पो आउँथे । अहिले किन आउँथे ? हामीसँग लिने फाइदा लिइसके । अब हामीसँग के छ र दुःख भन्दा । हामीले उनीहरुलाई खुवाउन पाल्न सक्दैनौं ।’
‘त्यसो भन्नु हुँदैन, जे भए नि छोराछोरीले रगत बगाएको पार्टी हो ।’ बुढाले सम्झाउने प्रयास गरे ।
‘अँ साँच्चै लडाइँमा मारिएका परिवारलाई सर्खारले पैसा दिएको छ रे । दोकानदारले त्यसै भन्थ्यो ।’ बिर्सेको कुरा सम्झे झैं बुढीले भनिन् ।
‘कहाँ दिएको रैच ?’
‘जिल्लाको सिडिओकोमा ।’
‘खै, कोसँग बुझ्ने ? त्यतै जानुपर्ला ।’ जगतलालले भन्यो ।
भोलिपल्ट बिहानै बर्मेल्नी बुढीले खाना तयार बनाइन् । सात बज्दा नबज्दै तिनीहरु भात खाएर हिँडिसकेका थिए । घुर्मैलो देखे पनि जगतलाल फटाफट हिँड्न सक्दैनथे, बुढीको सहारामा हिँड्नुपथ्र्यो । बलियो मान्छेलाई त्यहाँबाट सदरमुकाम पुग्न दुई घण्टा लाग्दथ्यो । तर, ती दम्पती त्यसरी हिँड्न सक्दैनथे । उनीहरु सदरमुकाम पुग्न पूरा छ घण्टा लाग्यो । उनीहरु जिल्ला कार्यालय पुग्दा एक बजिसकेको थियो ।
‘यहाँ पीडितलाई सर्खारले सहायता बाँडेको छ रे ।’ उनीहरुले त्यहाँको एउटा कर्मचारीसँग कुरा राखे । ‘हो, बाँडेको छ, तपाईंहरुको के भएको हो ?’ कुरा सुन्ने कर्मचारीले भन्यो ।
‘हाम्रा छोरा र छोरी दुवै सर्खारबाट मारिएका हुन् ।’ बुढाले बेलीबिस्तार लगाए ।
‘ती मर्ने तपाईंका छोराछोरी हुन् भनेर नाता सम्बन्ध प्रमाणित गरेर आउनुपर्छ ।’
‘महेश र निरजा हामै्र छोराछोरी हुन् । हाम्ले ढाँटौंला त ? महेशलाई समातेर मारेका हुन् । निरजा बेनी हो कि कता हो मारिएकी हो ।’ बुढीले भनिन् ।
‘तपाईंहरुले भनेका कुरामा हाम्रो अविश्वास छैन, तर तपाईंहरुलाई हामी चिन्दैनौं । न ती मारिएका व्यक्तिहरु तपाईंहरुका छोराछोरी नै हुन् भन्ने जानकारी छ । त्यसैले गाविसबाट ती मारिएको प्रमाणपत्र र नातासम्बन्ध प्रमाणित गरी लिएर आउनुपर्छ । तबमात्र पैसा दिन मिल्छ ।’ कर्मचारीले फेरि पनि अथ्र्यायो ।
‘जाऊँ त अब, मिल्दैन भनेपछि ।’ बुढाबुढी त्यहाँबाट हिँडे । दिन ढल्कंदै गएको थियो । सिमसिम पानी पर्न थालेको थियो । बुढाबुढी ढुकुरको चल्ला रुझेझैं निथ्रुक्क भिजेर जाडोले लगलग काम्दै राती नौ बजेमात्रै घरमा आइपुगे ।
अँध्यारोमा सुनसान उभिएको रित्तो घरले तिनीहरुलाई पर्खिरहेको थियो । जाडो कक्रक्क परेका हातले बुढी आमाले बल्लबल्ल साँचो खोलेर ढोका उघारिन् । त्यसपछि दुई हातले छाम्दै अँगेनामा पुगिन् । बिहान खरानी घुसारेको मुढोमा आगो ज्युँदै रहेछ । त्यसलाई ठोसेर आगो सल्काएर दाउरा हालिन् । एकैछिनमा आगो ह्वारह्वार्ती बल्न थाल्यो । भोकतिर्खा बिर्सेर बुढाबढीले आगो ताप्न थाले ।
भोक र थकाइले ती दुबै आक्लान्त थिए । भोकले जति आत्तिए पनि झटपट उठेर खाने कुरा पकाउने ताकत कसैमा थिएन । अघिपछि बुढीले उज्यालैमा भात पकाउँथिन् । साँझ परेपछि जिउ त्यसैत्यसै भारी हुन्छ, उठ्नै सक्तिनथिए् । आज त झन् दिनभरि हिँडेर थाकेको जिउ, उठेर केही गर्ने आँट नै भएन । तैपनि नउठी हुँदैन । आफू मात्रै भए घुत्रुक्क पल्टन्थिन् । बुढाका आँखा बसेपछि उनलाई पस्केर खान दिने कोही भएन, न त एक खेप पानी ल्याइदिने मान्छे नै ।
‘यिनै बुढा हुन् सहारा, यी पनि भएनन् भने…………’ बुढाको मायाले उनलाई केही श्क्ति दियो । बिस्तारै हात टेकेर उठिन् । डालीमा कोदाको पिठो थियो । त्यसैको पुवा बनाइन् र नून पिधिन् । तिनीहरुले आज पुवा र पानीले छाक टारे ।
‘भोलि सिफारिस बनाउन जान प¥यो ।’ बुढाले भने ।
‘त्यहाँ पनि के के झमेला लगाउने हुन् ।’ बुढीलाई सिफारिस पाइएला भन्ने कुरामा विश्वास थिएन ।
‘बुढी मेरो त पेट काट्या कटक्क, दिसा जान पर्ला जस्तो पो भयो ।’
‘लौ मा¥यो, अँध्यारो छ, कसरी जाने हो ?’ बुढीका मुखबाट एकाएक निस्कियो र तिनले फेरि भनिन्, ‘लौ हिँड ।’
अँध्यारोमा खुट्टाको सारले बुढालाई डो¥याएर चर्पीतिर लाँदै थिइन् । बाटो अग्लो कान्लाको डिलबाट थियो ।
बुढाका खुट्टा चिप्लिएर शरीरको सन्तुलन बिग्रियोे । बुढीले धान्न सकिनन् र बुढा तल लड्न पुगे ।
‘लौ न नि गुहार, गुहार’ हँसले ठाउँ छोड्यो र उनी जोडले चिच्याउन थालिन् ।
‘ए, के भयो हँ ?’ नजिकको छिमेकी बुढीको हारगुहार सुनेर आइपुग्यो ।
‘बर्मेली बुढा लडेछन् ।’ उसले अरुलाई बोलायो र सबै मिलेर बुढालाई माथि ल्याए । देखिने चोटपटक केही लागेको रहेनछ ।
सधैं बसेरै उठेर यताउति गर्ने बुढा भोलिपल्ट बिहान अबेलासम्म पनि उठेनन् । बुढी आफ्नै धन्दामा थिइन् । उनी पकाउने तरखरमा लागिन् तैपनि बुढा उठेका थिएनन् ।
‘थाकेका बुढा निदाउनु न ।’ पहिला त उनले उठाउन चाहिनन् तर मन मानेन ।
‘उठ्ने होइन ?’ बुढालाई घच्घचाइन् ।
‘म त उठ्न सकिन, देब्रे खुट्टो चलाउनै हुँदैन ।’ कहराउँदै बुढाले भने । बुढीले हेरिन् घँुडो सुन्निएको रहेछ ।
‘हे भगवान्, आँखा त यसै बसेका थिए, अब खुट्टा पनि नचल्ने भए…..’ पार लगाउन नसक्ने विपत आइलागेको देखेपछि बुढी अत्तालिइन् ।
‘सन्चो हुन्छ औषधीमूलो गरेपछि ।’बर्मेली बुढाले बुढीलाई ढाडस दिए ।
‘खै, केले औषधी गर्ने हो ? अनि कसले लगिदिन्छ ?’
‘पिर नगर, घरगाउँको दबाई गरौंला ।’ बुढा एक किसिमले ढुक्क थिए । उनी चार पाँच दिनसम्म ओछ्यानमै थलिए । उठेर दिसापिसाब गर्न जानसम्म पनि सकेनन् । भूईचम्पा पिँधेर बुढीले घुँडामा छापिदिइन् । घिउ खोजेर ल्याइ सुप, चम्सुर र चौछाजोरको जरो मिसाएर पुवा बनाएर खान दिइन् । सात दिनपछि बुढा पहिला जस्तै हिँड्न सक्ने भए । बर्मेलीको मनमा खुसीको सीमा नै रहेन ।
‘बाबु, हामीलाई महेश र निरजाको नाता प्रमाणित गरेको कागज बनाइदिनुप¥यो ।’ बुढाबुढी दुबैले गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा गएर सचिवसँग आग्रह गरे । सचिव भरर्खरको युवा तन्नेरी थियो ।
‘बर्मेली बा, किन चाहियो सिफारिस ?’
‘सर्खारले राहत दिन्छ रे ।’
‘सिफारिस लगेर पैसा पनि झिकिसके, तपाईंहरुलाई खबर गरेनन् ?’
‘गरेनन् बाबु, कसले लग्यो सिफारिस ?’
‘तपाईंहरुकै बुहारी र जुवाइँले नि, अरु कसले लान मिल्छ र ?’
बुढाबुढी छाँगाबाट खसेजस्तै भए, केही बोल्न सकेनन् ।
‘बिहे त भएको थियो, होइन र ?’
‘भएको थियो ।’
‘मृतकका सबैभन्दा नजिककालाई सहयोग गर्ने नियम छ । श्रीमान् श्रीमती नै अरुभन्दा नजिकका नातेदार हुन् । त्यसैले उनीहरुले नै सहयोग पाएका हुन् ।’ सचिवले बुढाबुढीको चित्त बुझाउन खोज्यो ।
‘पार्टीमै बिहें गरें, टाढा भएर बोलाउन सकिन, पछि बुहारी लिएर आउँछु ।’ महेशले बाबुआमालाई खबर गरेको थियो । बिहेमा जान नपाएर बुढाबुढी दुःखित भएनन् बरु हर्षविभोर बनेका थिए । आफ्नो बिहे भएको एक वर्षपछि जिरनाको पनि महेशले पार्टीभित्रै बिहा गरिदिएको थियो । बुढाबुढीले त न बुहारीलाई चिन्न पाएका थिए न जुवाइँलाई । कतैबाट पनि बच्चाबच्ची हुन पाएका थिएनन् । पछि जुवाइँले अर्को बिहा गरे र बुहारीले पनि । त्यसैले उनीहरुको खोजीनीति गर्न बुढाबुढीले जरुरी ठानेनन् ।
‘उनीहरुले बिहे गरेपछि पनि हाम्रा छोराछोरीको नजिक भइराख्छन् कि क्या हो ?’ बुढीको आक्रोश थियो ।
‘पछि बिहे गरेको प्रमाण हामीसँग छैन ।’ ‘बेइमान कहीँका , हाम्रा छोराछोरीको नाममा आएको पैसा लिने भएपछि त हाम्लाई पाल्न पनि त प¥यो नि ।’ बुढीले फेरि भनिन् ।
‘भो नकरा बुढी छोराछोरीको ज्यान त गयो भने जाबो पैसा जसले खाए पनि खाऊन् ।’ विरक्त भावमा बर्मेली बुढाले भने ।
‘त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ ? अन्याय मास्ने भने पो छोराछोरीले ज्यान अर्पेका हुन् । झन् उनीहरुकै नाममा अन्याय ?’ बुढी पनि भावुक बनिन् ।
‘सहिद र सहिद परिवार खोलो तरेपछिका लौरा हुन्, तिनहरुलाई बिर्सन्छन् अरुले । हाम्रो बोली कहाँ बिक्छ र ? भो हिँड् जाऊँ घर ।’
दुवै बुढाबुढी गाविस कार्यालयबाट बाहिर निस्के । सचिवले उनीहरु गएतिर ट्वाल्ल परेर हेरिरह्यो ।
दुई वर्ष अरु बिते । यस बिचमा पार्टीको तर्फबाट बर्मेली दम्पतीलाई भेट्न कोही आएनन् । कोही आउँछन् भन्ने आशा पनि उनीहरुले गरेका थिएनन् ।
पुस महिनाको पाहारिलो दिन थियो । बुढाबुढी आँगनमा बसेर घाम तापिरहेको थिए । त्यसैबेला एउटा युवक र युवती टुप्लुक्क आइपुगे ।
‘नमस्कार बा, आमा । हामी महेश र निरजाका साथी ।’ उनीहरुले आफ्नो परिचय दिए ।
‘साथी रे ।’ बुढाबुढी एकछिनसम्म त अक्क न बक्क भए । बुढी आमैका नयनबाट आँसुका धारा बगे । बुढा पनि सुरुमा त थामिन सकेनन् । आगन्तुकहरु छोराछोरीका साथी थिए थिएनन् कुन्नि तर बुढाबुढीलाई भने धेरै वर्षपछि छोराछोरी घर फर्केर आएको जस्तो भयो ।
‘नरुनोस् हामी पनि तपाईंहरुकै छोराछोरी हौं ।’
‘कहाँ छौ त आजभोलि ?’
‘पार्टीमै छौं ।’
‘पार्टीले त सर्खार बनाएको, सबै मोजमस्तीतिर छन् रे नि त ।’ बुढाले भने ।
‘कोही मोजमस्तीमा पनि छन् तर हामीले पार्टीमै काम गरिरहेका छौं ।’
‘नपाएर त होला नि, पाएपछि कसले छोड्छ र ?’ बुढी आमाको भनाइ थियो
‘त्यसो होइन आमा, हामी आफूले मात्र पाउने प्रयास गरेनौ । जनक्रान्ति पूरा भएको छैन, सहिदका सपना बाँकी नै छन् । हामीले केही पाउनुभन्दा जनक्रान्ति सम्पन्न हुनुपर्छ । यो अभियान रोकिनु हुँदैन ।’
‘अझै पनि मान्छे बाँकी रहेछन् ।’ थोरै भए पनि बर्मेली बुढालाई सन्तोष लाग्यो ।
‘बाबुहरु भोकै छौ होला ?’ बुढी आमाले सोधिन् ।
‘होइन आमा, हामीले खाएर आएका हौ ।’ महिलाले जवाफ दिइन् बर्मेलीको मन हलुंगो भयो । कथंकदाचित भोकै छौं भनेका भए उनीसँग खाना खान दिनका लागि केही थिएन ।
आगन्तुकले घरभित्र र बाहिर हेरे । जताततै फोहोरको डंगुर थियो । तिनीहरुले आँखाले केही संकेत गरे र युवतीले भनी, ‘आमा, हामीले घर सफा गर्छौं है ।’
‘भो पर्दैन, हाम्रा लागि किन दुःख गर्छौ ?’ बर्मेली बुढीको मुखले इन्कारीको भाषा बोले पनि मनले गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो । केटाकेटी भने काममा लागिसकेका थिए । उनीहरुले काम गर्न थालेपछि बुढी उठेर सघाउन खोजिन् तर ‘बस्नोेस् पर्दैन, हामी गर्छौं’ भन्दै युवतीले रोकी । भित्र सफा गर्ने क्रममा तिनीहरुले भित्रका सबै भाँडाकुँडा हेरे । अन्नका नाममा चार पाथी जति कोदो थियो । चामलको गेडो थिएन । दुई माना जति पिठो हुँदो हो ।
युवकले बाहिर निस्केर कसैलाई फोन ग¥यो । युवतीले यताउति हेरेर दाउरा जम्मा पारी र साँझपख दुईजना अरु मानिस आए । तिनीहरुले चामल र खाने तेल ल्याएका थिए ।
‘के खान्छौ बाबु हो, कोदो पनि पिसेको छैन ।’ बुढी आमा फटफटिन थालिन् ।
‘आमा, पिर नगर्नोस् । तपाईं बस्नोस् । खाना हामी बनाउँछौं । खर्चको व्यवस्था भइसकेको छ ।’
खाना खुवाइसकेपछि आगन्तुकहरुले तत्काल गर्नुपर्ने कामको विषयमा छलफल गरे । उनीहरुले घरनजिकै एउटा चर्पी बनाउने, दाउराको व्यवस्था गर्ने, कपडा धोइदिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखे । अनि यहाँ पार्टी सेल बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । त्यसो भएमा सहिद परिवारको रेखदेख गर्न सहज हुन्थ्यो ।
भोलिपल्ट बिहानैदेखि तिनीहरु काममा जुटे । युवती कपडा धुनतिर लागी भने युवकहरु चर्पीका लागि खाल्डो खन्न थाले । खाल्डो बनाउनुपर्ने ढक्कन हाल्ने र माथि छाना समेत बनाउनुपर्ने हुँदा चर्पीको कामले तिन दिन खायो । चौथो दिन उनीहरुले खरबारीको एउटा रुख काटेर दाउरा बनाए । पाँचौं दिनमा तिनीहरु त्यहाँबाट हिँड्न तरखरमा थिए ।
‘तपाईंहरुसँग पार्टी छ, हामी छौं एक्लै नठान्नुहोला ।’ हिँड्ने बेलामा एउटाले भन्यो ।
‘महेशले त्यसै भन्थ्यो. ।’ बुढा भावुक भए ।
‘अहिले बारीमा मकै रोप्नुपर्छ खनजोत गर्न हामी आउँछौं ।’ अर्कोले भन्यो ।
‘बाबुहरु आउँदै गर्नुहोला ।’ बर्मेल्नी बुढीले भनिन् ।
‘चिन्ता नगर्नोस् आइरहन्छौं , हामी फेरि संगठित भएका छौं ।’
‘लौ त, हामी जान्छौं, बस्नोस् है त । त्यस्तो अपर्झट केही परेछ भने यो खर्च गर्नुहोला ।’ एउटा युवकले बर्मेली बुढाको हातमा एक हजारको नोट थमाइदियो ।
अनि तिनीहरु त्यहाँबाट बिदा भए ।
उनीहरुले आँगन छोड्ने बित्तिकै बर्मेली बुढाले तिनीहरु छाया जस्तो आकृति पनि देख्न छोडे भने बर्मेल्नी बुढीले पर नछोपिने बेलासम्म तिनीहरुलाई हेरिरहिन् ।
शनिवार साहित्य No Comments » Print this News
« क्लिङकरको आयात रोकिएपछि व्यापारीद्वारा सिमेन्टको मूल्यमा कालोबजारी (Previous News)
(Next News) आठ घण्टाभन्दा कम सुत्नेलाई मानसिक समस्याको खतरा »
प्यास्पी चाम्लीङ्ग एकहुल दाजूभाईहरु कामूक सन्ध्याको छायाँमा वैंशको उन्मत्त हुरी बोकेर भर्खर भट्टीबाट फर्कँदैछन् रपूरा पढ्नुहोस्
रोशन जनकपुरी शाही सेनाको नाइट भिजन हेलिकोप्टरले रातभरि बम खसालिरहे पनि जनसेनाले गरेको घेराबन्दी टुटेनपूरा पढ्नुहोस्
उष्माको एक बिहान
बन्दी छोराको पत्र